Mabhenefiti eOccupational and Recreational Therapy - Hinds Feet Farm
Patinofunga nezve kurapwa uye kukuvara kwehuropi ndiyo yekutanga kufunga ndeye rehab inoitika zvakananga mushure mekukuvara. Kashoma kuti tifunge nezve musiyano wekurapa kungaita muhupenyu hwemudiwa wedu makore mushure mekukuvara kwekutanga. Tichifunga nezvemashure eAllied Health Coordinator, Brittany Turney, nhengo dzichava nemukana wakasiyana-siyana wekutora chikamu mumabasa eOccupational and Recreational Therapy. Nhengo dzedu dzinokura zvakanyanya muhunyanzvi hwavo hwekushamwaridzana, kuita zvevaraidzo uye kuwana humwe rusununguko mumabasa ezuva nezuva. Panguva yezviitwa tinozotarisa pane kusimba kwemunhu kumubatsira kuzadzisa zvinangwa.
Zviito zvinogona kusanganisira…Kubika keke rebirthday reshamwari kubatsira kusimbisa ushamwari uye kuzvida. Kushandisa zvishandiso zvekurovedza muviri muRec Center kuvaka mhasuru dzemakumbo dzakasimba kuita kuti kufamba kuve nyore. Kutora rwendo kuenda kuchitoro uye kutenga zvinodiwa kubatsira kuvaka ruzivo rwemashandisiro emari. Kuedza nemichina yakasiyana-siyana inogadzirisa kuita chimbuzi, kupfeka, kana kunyange kudya nyore kuti nhengo iite yakazvimirira.
Mikana haiperi!! Nekutarisira kweOTA/RT imwe chete nhengo dzedu dzinogona "kuwedzera mukana wekukuvara kwepashure ... nehurongwa hwakabatanidzwa, hwakasiyana, uye hwakazara.", sezvakataurwa muHinds' Feet Farm mission statement.